ကျွန်ုပ်၏ Facebook ကိုစကားဝှက်မပါပဲဘယ်လို ၀ င်ရမလဲ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ဒန်နီရယ် Terrasa | | Facebook က, social networking
အကယ်၍ သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုမေးခွန်းများစွာအကြိမ်ကြိမ်မေးခဲ့ဖူးသည် «ကျွန်ုပ်၏ Facebook ကိုစကားဝှက်မပါပဲမည်သို့ထည့်ရမည်နည်း။ » ထို့အပြင်တခါတရံတွင်ဤလူကြိုက်များသောလူမှုကွန်ယက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအခါသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်မှာစိတ်ရှုပ်စရာသို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်ရာဖြစ်သည်။ ကိရိယာအသစ်မှသာမကလုံခြုံရေး၊ နေရာလိုအပ်ချက်များအတွက်သမိုင်း၊ ပုံမှန်အချက်အလက်များ၊ ကွတ်ကီးစသည်တို့ကိုပုံမှန်ဖျက်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်စက်ပစ္စည်းမှသာမကသာမက
ကောင်းပြီ၊ ဒီ post မှာစပိန်ဘာသာနဲ့လူမှုရေးကွန်ရက်ထဲဘယ်လိုဝင်ရောက်ရမယ်၊ စကားဝှက်မထည့်ဘဲ Facebook ကိုဘယ်လိုတိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်ရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်။
ဒါဟာ "လှည့်ကွက်" ထက်ပိုအကြောင်း, ကပြောသည်ရမည်ဖြစ်သည် အရင်းအမြစ်တစ်ခု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထက်ပို Facebook က။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အသုံးပြုသူများရဲ့ ၀ င်ရောက်မှုကိုသိသိသာသာလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ အင်တာနက် browser (ဘရောက်ဆာ) များ၏အကောင့်များနှင့်စကားဝှက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်ပုံမှန်ရွေးချယ်စရာများကိုမသုံးပဲမနေပဲ။ ဒါဆို password မပါပဲ Facebook ကိုဘယ်လိုရောက်သွားမလဲ။ ကွန်ပျူတာနှင့်မိုဘိုင်း (သို့) တက်ဘလက်များမှမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်။
1 ကျွန်ုပ်၏ Facebook ကိုစကားဝှက်မပါပဲထည့်ပါ
2 autocomplete ဒေတာနှင့်အတူ Facebook ကိုရိုက်ထည့်ပါ
3 ကျွန်ုပ်၏ Facebook စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူပါ
3.1 login အမှားသတင်းပို့ပါ
ကျွန်ုပ်၏ Facebook ကိုစကားဝှက်မပါပဲထည့်ပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသူများသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ကိုသတိမထားမိကြပါ အလိုအလျှောက် login option ကို configure အတွက် configuration settings ကိုမှတဆင့်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဖိုင်နှင့်အမြဲတမ်းဆက်စပ်နေလိမ့်မည်။ အောက်ပါအဆင့်များမှာ -
ပထမဆုံး Facebook မျက်နှာပြင်ထိပ်မှာပေါ်လာတဲ့ inverted arrow ကိုနှိပ်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့် options ကိုမီနူး.
ထို့နောက်သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည် "ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုံခြုံရေး" ပြီးတော့မှ "Setting".
ပြီးရင်ဖွင့်မယ့် menu အသစ်ထဲမှာ၊ သင်ရွေးစရာကိုရွေးပါ "လော့ဂ်အင်" နှင့်သူမ၏အတွင်းပိုင်း၌တည်၏ «သင်၏လော့အင်အချက်အလက်ကိုသိမ်းပါ»ကိုနှိပ်ပါ "တည်းဖြတ်".
ပြီးဆုံးဖို့, ငါတို့ option ကိုနှိပ်ပါ "သင်၏ login အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းပါ။ " ဤနည်းအားဖြင့်ဤဘရောင်ဇာကိုသုံးသည့်အခါတိုင်း Facebook နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်စကားဝှက်ကိုထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။
Y မည်သည့်အချိန်တွင်ငါတို့သည်ဤ option ကိုပိတ်ထားရန်ဆန္ဒရှိလျှင်သငျသညျအစအ ဦး မှဤအဆင့်တူခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာရုံနှင့်, သင်ဒီမှာရောက်သောအခါ, "Deactivate" option ကိုနှိပ်ပါ။
အရေးကြီးသော: ဤရင်းမြစ်သည်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာကိရိယာများအတွက်သာလျှင်တရားဝင်သည်။ သို့သော်အများသုံးကွန်ပျူတာများနှင့်လူအများအသုံးပြုခွင့်ရသည့်အလုပ်ဖြစ်သည့်ကွန်ပျူတာကဲ့သို့သောအခြားအသုံးပြုသူများအားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှအကြံပြု။ မရပါ။ ငါတို့သာဒီလိုလုပ်ရင်ငါတို့ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်ထဲကိုသူစိမ်းတစ်ယောက်ဝင်နိုင်အောင်တံခါးကိုဖွင့်ထားလိမ့်မယ်။
autocomplete ဒေတာနှင့်အတူ Facebook ကိုရိုက်ထည့်ပါ
ပုံမှန်အားဖြင့်, ၌ Google က Chrome ကို ၏ function ကိုတက်ကြွစွာရှိပါတယ် "စကားဝှက်များကိုသိမ်းဆည်းပါ"။ သို့သျောလညျး, ငါတို့ဆန္ဒအလျောက်သို့မဟုတ်မတော်တဆအားဖြင့်ကျနော်တို့ကဒီ option ကိုပိတ်ထားသို့မဟုတ်စက်၏မှတ်ဉာဏ်ကိုဖျက်ကြပြီဖြစ်ပျက်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိရိယာတွင်စကားဝှက်ကိုသိမ်းဆည်းထားလိုခြင်းရှိမရှိမေးခွန်းကို“ no” ဟုဖြေပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီလူမှုကွန်ယက်ကို log in လုပ်တဲ့အခါမှာစကားဝှက်ဟာပေါ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်တဖန်အကျွမ်းတဝင်မေးခွန်းပေါ်လာ: password ကိုမပါဘဲငါ့အ Facebook ကိုဘယ်လိုထည့်သွင်း?
ဖြေရှင်းနည်းကတဆင့်ပါ autocomplete ဒေတာအတွက် setting များကိုပြောင်းလဲပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ Facebook စကားဝှက်ကိုဘရောက်ဇာတွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုရရှိရန်သင်သည်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရမည် -
Google Chrome drop-down menu ကိုဖွင့်ပြီး "Settings" option ကိုရွေးပါ။
၏ menu ထဲမှာ"Setting" ရွေးချယ်စရာ "အပြီးသတ်".
အဲဒီမှာသင်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါရန်ရှိသည် "စကားဝှက်များ", "ငါသည်စကားဝှက်များကိုသိမ်းဆည်းထားလိုလျှင်မေးပါ" function ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ကျနော်တို့ option ကိုရောက်ရှိသည်အထိနောက်ကျောဆင်းရွှေ့ "ဘယ်တော့မှမသိမ်းဆည်းရသေးသည့်စကားဝှက်များ။ " အကယ်၍ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများအနက်အမှတ်အသားပြုပါက၎င်းကိုရပ်တန့်ရန် "X" ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Google Chrome ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည် Facebook ကိုသွားပြီး log in လုပ်ပါ.
ထို့နောက်လူသိများသောမေးခွန်းဖြစ်သည် "စကားဝှက်ကိုသိမ်းချင်လား။ "။ ဒီမှာ Save ကိုနှိပ်ပါ။
ဒီအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်၊ Facebook စကားဝှက်ကိုဂူဂဲလ်နဲ့ဘရောင်ဇာထဲမှာသိမ်းလိမ့်မယ်။ ၎င်းရဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာစကားဝှက်ကိုထည့်စရာမလိုပဲအခြားစက်တစ်ခုမှ Facebook သို့ဝင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းသင်တန်း၏, ထိုပစ္စည်းကိရိယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်နှင့်အတူတူဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ Facebook စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူပါ
ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်သောမေးခွန်းအတွက်မေးခွန်းသည် ပို၍ ပင်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည် Facebook စကားဝှက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် သုံးစွဲသူများစွာမှာဤဖြစ်ရပ်နှင့်ကြုံတွေ့ရပြီး၊ အချို့မှာဤလူမှုကွန်ယက်ကိုမထည့်ဘဲအချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးခြင်းသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုမှန်ကန်စွာသိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်အလွတ်ကျက်ခြင်းမပြုခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ဤပြforနာအတွက်ဖြေရှင်းနည်းများလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အားစကားဝှက်မရှိဘဲမဝင်ရောက်နိုင်ပါကထိုစကားဝှက်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးစားရမည်။ Facebook ကအချို့ကိုကမ်းလှမ်းသည် အသုံးဝင်သော tool များကို ဒီနှောင့်အယှက်အခြေအနေမျိုးဖြေရှင်းရန်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအောက်တွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်:
"ဝင်ခွင့်အမှား" ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဤသတင်းစကားကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုမှာအကူအညီတောင်းခံရန်ဖြစ်သည် ဒီ link ကို။ အဲဒီမှာအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ယက်ကိုအကြောင်းကြားဖို့အခွင့်အရေးရလိမ့်မယ်။
အကူအညီရရန်သင်ဖြည့်ရမည် ပုံသဏ္ဌာန် ကျနော်တို့ပြproblemနာကိုဖော်ပြရန်ရမည့်အတွက်လယ်ကိုအထူးအာရုံစိုက်မှု, ပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ရယူနိုင်မည့်အကောင့်တစ်ခုနှင့်အီးမေးလ်တစ်ခုထည့်ရန်မမေ့သင့်ပါ။ စခရင်ရိုက်ကူးရန်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ကအမြဲတမ်းတုန့်ပြန်ပေမယ့်ချက်ချင်းဖြေရှင်းချက်ကိုမစောင့်ပါဘူး။ ပြproblemနာအမျိုးအစားနှင့်ပြinနာဖြေရှင်းရာတွင်ပါ ၀ င်သည့်အခက်အခဲများပေါ် မူတည်၍ တုံ့ပြန်မှုသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုကြာနိုင်သည်။
သင်၏ Facebook စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် အသုံးပြုသူများအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိသေသလက္ခဏာအတည်ပြုပါ။ နောက်တဖန်တစ် ဦး ကိုဝင်ရောက်ရပါလိမ့်မယ် လင့်ခ် သောဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ပလက်ဖောင်းအတွင်းဖန်တီးစာမျက်နှာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ကိုကြာပါသည်။
ဒါ့အပြင်ဒီမှာသင်တစ် ဦး ဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ပုံသဏ္ဌာန် နှင့်ပူးတွဲပါ ဝိသေသလက္ခဏာ မွေးရက်၏ရက်စွဲကိုပြသတဲ့ဓာတ်ပုံနှင့်အတူ။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်မှန်ကန်သည်ဟု Facebook ကယူဆသောစာရွက်စာတမ်းများစွာရှိသည်။ ID၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ မွေးစာရင်း၊ အခွန်မှတ်ပုံတင်စသဖြင့်။
Facebook ကကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်အသားကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့် (လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရက်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်) ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်သို့ပြန်လည် ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုလက်ခံရရှိရန်ဤတောင်းဆိုချက်ကိုပြုလုပ်သောအခါအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုအကြောင်း Facebook အားအကြောင်းကြားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ Facebook အကောင့်တစ်ခုကိုဖွင့်လို့မရဘူး၊ ဤအခြေအနေသည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်တွေ့ရှိသောအခါ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ရပ်ရွာစံနှုန်းများနှင့်မကိုက်ညီသောအပြုအမူ (အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးသည့်အပြုအမူ၊ စော်ကားမှု၊ အမုန်းစကား၊ လျှို့ဝှက်ချက်၊ spam၊ ဂရပ်ဖစ်အကြောင်းအရာစသဖြင့်) ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စနစ်များသည် အကောင့်အားခေတ္တပိတ်ထားပါသို့မဟုတ်ပိတ်ပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်“ ex officio” ကိုအကြိမ်များစွာမပြုလုပ်သော်လည်းအကောင့်ကိုအစီရင်ခံသောအခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏တောင်းဆိုချက်အရ သင်သိပြီးသားဖြစ်သည်။ လူမှုကွန်ယက်များတွင်လူတိုင်းသည်လူတိုင်းကိုကြည့်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အသုံးပြုသူများသည်ပြန်အမ်းငွေကိုတောင်းဆိုရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့သောပြissueနာအတွက် Facebook ပလက်ဖောင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသည် link ကို မည်သည့်နေရာတွင်လျှောက်ထားရမည်၊ ပုံစံတစ်ခုကိုဖြည့်စွက်ပြီးမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းစကားဝှက်မပါပဲ Facebook ကို ၀ င်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်သို့ဝင်ရောက်ရန်ဖော်မြူလာများစွာရှိသည်။ သို့သော်ဟောင်းနွမ်းသောစကားများပြောသည့်အတိုင်းစိတ်မကောင်းခြင်းထက်လုံခြုံမှုသည်အမြဲတမ်း ပို၍ ကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုအရာများကိုအမြဲတမ်းမှတ်သားထားရန်အရေးကြီးသည် အခြေခံလုံခြုံရေးအကြံဥာဏ်များ -
Facebook အကောင့်ကို Google အကောင့်နဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။
နောက်ထပ်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်လုံခြုံရေးအစီအမံတစ်ခုမှာသင်၏ Facebook အကောင့်ထဲသို့သင်၏သုံးစွဲသူအကောင့်ထဲသို့ထည့်ခြင်းဖြစ်သည် "ယုံကြည်ရသောခင်မင်ရင်းနှီးမှု"။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် "လုံခြုံရေးနှင့်လော့ဂ်အင်" မီနူးသို့ သွား၍ "စိတ်ချရသောသူငယ်ချင်းများ" ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ။ ထိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးယုံကြည်မှုရှိသူ (သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစု ... ) နှင့်အသုံးပြုသူအကောင့်တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထပ်ထည့်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Facebook ၏သူငယ်ချင်းများထက်ပိုသောလူများဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်နံပါတ်မေ့သွားလျှင်၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ရယူရန်သူတို့သွားနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » social networking » ကျွန်ုပ်၏ Facebook ကိုစကားဝှက်မပါပဲမည်သို့ထည့်ရမည်နည်း
ငါ Facebook ကို Google ကိုလိုချင်တယ်
ဖျက်သိမ်း Instagram ကိုတိုက်ရိုက် recover လုပ်ဖို့ဘယ်လို
မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်သည် IDP.generic နှင့်မည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း